Home https://isimbido.tv/casino-world/ slots social casino apk download chip deutsch
Ndị Nigeria na Òtù Na-eme Ihe Ike Mmebi na Mmekọahụ (DSVRT) abụwo onye na-abụ abụ, Folarin Falana a.k.a Falz maka ịkatọ ime ihe ike na vidiyo ya kacha ọhụrụ.
Ihe mmeghachi omume mere mgbe onye mmeri a na-egwu nri na-ekwupụta na e wepụtara vidio nke a kpọrọ “Nwa nke ụwa” na ntanetị mgbasa ozi ọha na eze ya @falzthebahdguy FALZ – “Child Of The World” video video “
DSVRT kwuru na ọ kwetara na Falz gbalịrị ikwu okwu banyere “ezigbo ndụ” na akaụntụ twitter ha.
@DSVRT “Anyị ga – achọ iji usoro a na – aghọta Falz maka ịkọwa okwu ahụ na Mmekọahụ Mmekọahụ na vidio a tọhapụrụ ọhụrụ maka abụ ya, nwa nke ụwa.
“Anyị ga – ejikọta ọnụma a. Daalụ maka ịkọwa ndị lanarịrị na ntụziaka maka enyemaka na ikpe ziri ezi @falzthebahdguy “.
Enweela ọchịchọ a na-achọsi ike maka ndị na-egwu egwú na Naijiria iji nkà ha na-ekwu okwu banyere nsogbu ndị na-emetụta ọha na eze na ndụ. “
Mgbe ụfọdụ ndị Naijiria weere na Twitter iji mee ka echiche ahụ dị n’azụ vidiyo vidiyo ndị ọzọ na-akpọ ndị ọkachamara ka ha mee otu ihe ahụ.
@iambussie “Na mba ebe anyị nwere onye ọrụ egwu na-abụ abụ na vidiyo naanị n’ihi uru azụmahịa, ọ dị obere ịhụ ụdị Falz”.
@alpha_jenner “Falz metụrụ iyi egwu mmekọahụ, HIV / AIDS na igbu onwe ya n’otu oge na Nwa nke Ụwa. Ya mere, Falz yiri ka ọ na-eme ihe niile dị ka onye na-ese ihe iji kwuo okwu megide nsogbu ndị otu n’otu “.
@elsieisy “Ndị na-ewu ewu anyị ekwughị okwu gbasara nsogbu mmadụ,
Ka anyị gee ndị na-ekwu okwu n’ụzọ dị ịtụnanya ntị “
@ifol_ “Site na nwa nke ụwa ruo nke a bụ Nigeria na ihe ọ bụla ọzọ ị ga-eme bụ na anyị chọrọ ka ị mara na anyị ndị Fans na-anya isi gị”.
@t_riumphant “Kwadoro otú Falz si emeso isiokwu dịka ndina n’ike, nje HIV na igbu onwe ya na otu video.Nye nke ụwa na-agba”.
“nyocha” Falz na-emetụ ihe dị mkpa aka na egwú ya na ndị m, bụ “
@michealeyitayo “Ozi dị na vidio a dị omimi ma na-agba ume ọha mmadụ chọrọ ka ndị na-egwu egwu dị ka gị @falzthebahdguy #ChildOfTheWorld”.
“@wojayz” Falz bụ nnukwu onye na-eji egwu iji ekwurịta okwu n’eziokwu, #ChildOfTheWorld video bụ ihe a ma ama. Egburu m egbu, m na-atụ anya na vidiyo, ee, echere m na ọ gaghị akọwa ozi ọma Kemi Adetiba mere ezigbo ọrụ “.
Ndị ọzọ kwuru na echiche dị n’azụ song ahụ gosipụtara nke ọma site na nnukwu nwa Nwanna Naija housemate Bambam na vidiyo egwu.
O mere dika “nwa nke uwa” onye nna nna ya na-emegbu onwe ya.
Ọzọkwa, ọgba aghara na-amanye ya iso ndị nwoke bara ọgaranya na-enwe mmekọahụ iji bie ego iji bie ndụ ụfọdụ.
Vidio a kachasị anya bụ ihe nkiri vidio a kpọrọ “Nke a bụ Nigeria” nke Falz tọhapụrụ na mbụ n’afọ a, na-emetụkwa nsogbu ndị metụtara ndị Nigeria.
Ka ọ dịgodị, Kemi Adetiba, onye nduzi vidio egwú, kelere ndị Naijiria maka nzaghachi na vidiyo ọhụrụ ahụ dịka ọ bụ nọmba YouTube 1 nke na-emegharị vidiyo.
“N’ihe ọtụtụ ozi na-ezigara ya, ọ na-eme ka ọ dị ọhụrụ na” Nwa nke Ụwa. “
Ọ dị m ụtọ ịlaghachi ebe ọ malitere … Music Videos.
N’ihi Falz maka ịbụ onye Artiste dị ịrịba ama, egwu dị egwu, na iche na m bụ onye nwere ike ịkọwa ya.
Ana m ekele Toyin Abraham na Bambam maka ịhapụ oge ha dị oké ọnụ ahịa ma na-ehulata ụra nke m.
Daalụ maka ndị ịpị na-ekiri. M na-ahụ ihe ị na-eme na ọnụ ọgụgụ na ọ bụghị ọbụna awa 24 ma ” Adetiba kwuru.